Kedu ihe na-efu iji nweta ihe na-echekwa onye ahịa? | Martech Zone
Enwere ụfọdụ amamihe juru ebe niile na ego nke inweta onye ahia ohuru nwere ike ịbụ 4 ka 8 ugboro ndị ụgwọ nke ijigide otu. M na-ekwu nke amamihe n'ihi na ahụrụ m na ọnụ ọgụgụ ahụ na-ekekọrịta mana anaghị ahụkarị ihe m ga-eji soro ya. Anaghị m enwe obi abụọ na idebe onye ahịa adịghị ọnụ maka nzukọ, mana enwere mwepu. Dịka ọmụmaatụ, na azụmaahịa ụlọ ọrụ, ịnwere ike mgbe ụfọdụ zụọ ahịa - onye ahia nke puru dochie ya ka nma kari. Na nke a, idebe onye ahịa nwere ike were ego azụmaahịa gị na oge.
Ka o sina dị, ọtụtụ n'ime ngụkọta oge agafeela n'ihi mmetụta nke ndị ahịa na mbọ ahịa anyị. Mgbasa mgbasa ozi, ntanetị n'ịntanetị, saịtị nyocha, na ụlọ ọrụ ọchụchọ na-enye ụgbọ mmiri ntinye aka maka ndị ahịa ọhụrụ. Mgbe ụlọ ọrụ ndị gị na ha na-arụ ọrụ nwere afọ ojuju, ha na-ekerịta nke ahụ na netwọkụ ha ma ọ bụ na saịtị ndị ọzọ. Nke a pụtara na njigide na-adịghị mma n'oge a ga-emetụta usoro ịzụ ahịa gị n'ụzọ na-ezighị ezi!
Nnweta na njigide usoro (Kwa Afọ)
Ọnụego Mmasị Ndị Ahịa = (Onu ogugu ndi ahia nke hapuru n’aho obula) / (Onu ogugu ndi ahia)
Ọnụ Ahịa Nkwụnye Ahịa = (Onu ogugu ndi ahia - onu ogugu ndi ahia nke hapuru kwa afo) / (onu ogugu ndi ahia)
Ahịa Ndụ Ndụ (CLV) = (Onu ogugu uru) / (Onu ogugu ndi ahia)
Ọnụ Ahịa Ahịa (CAC) = (Onu ogugu ahia na ahia ahia tinyere ugwo) / (Onu ogugu ndi ahia enwetara)
Ofgwọ nke Ntinye = (Uru Ndụ Ndị Ahịa) * (Ọnụ ọgụgụ nke Ndị Ahịa Kwa Afọ)
Maka ndị na-agụghị akwụkwọ ndị a tupu oge a, ka anyị lee mmetụta dị na ya. Companylọ ọrụ gị nwere ndị ahịa 5,000, tụfuru 500 ha kwa afọ, nke ọ bụla na-akwụ $ 99 kwa ọnwa maka ọrụ gị na oke uru nke 15%.
Ọnụ Nkwado Ndị Ahịa = 500/5000 = 10%
Ọnụ Nchịkọta Ndị Ahịa = (5000 - 500) / 5000 = 90%
Ahịa Ndụ Bara Uru = ($ 99 * 12 * 15%) / 10% = $ 1,782.00
Ọ bụrụ na CAC gị bụ $ 20 maka ndị ahịa ọ bụla, nke ahụ siri ike laghachi na ntinye ego ahia, na-emefu $ 10k iji dochie ndị ahịa 500 hapụrụ. Mana gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịbawanye njigide 1% site na iji $ 5 ọzọ maka onye ahịa ọ bụla? Nke ahụ ga-abụ $ 25,000 nọrọ na mmemme njigide. Nke ahụ ga - eme ka CLV gị si na $ 1,782 ruo $ 1,980. N'ime oge ndụ ndị ahịa gị 5,000, ị meela ka akara aka gị dị ihe ruru otu nde dollar.
N'ezie, mmụba 5% na ọnụahịa ndị ahịa na-abawanye uru site na 25% na 95%
O di nwute, dika data weghaara na nke a ozi sitere na Invesp, 44% nke ụlọ ọrụ nwere nnukwu elekwasị anya na # nweta ebe naanị 18% lekwasịrị anya na #debe. Ndị ọchụnta ego kwesịrị ịghọta na ọdịnaya na atụmatụ mmekọrịta ọha na eze na-enyekarị uru bara ụba n'ụzọ njigide karịa ka ha si enweta.
Tags: nnweta na nkwụghachi azụOfgwọ nke Ntinyeahịa nnweta na-eriahịa nnweta vesos njigideỌnụego Mmasị Ndị Ahịaahịa ndụ urunjigide ndị ahịaọnụego njigide ndị ahịainfographicinvesp
Egwuregwu Social Media
Nke a bu kpomkwem ihe omuma m na acho. Daalụ maka ịkekọrịta nka gị!
Enwere m ekele na m gụọ isiokwu gị. Nke a ga-emetụta mkpebi m n'ọdịnihu na azụmaahịa m. Anyị kwesịrị ilekọta ndị na-erubere anyị isi.